इन्डोनेसिया भूकम्पमा १ लाख ५६ हजार विस्थापित
इन्डोनेसियाको लोम्बोकमा गत आइतबार गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण १ लाख ५६ हजार व्यक्ति विस्थापित भएका छन् । भूकम्पमा बुधबारसम्म १ सय ३१ को मृत्यु भइसकेको जनाइएको छ ।
स्ट्रेस भयो ? ‘ब्रेक रुम’ आउनुस्
तपाईलाई स्ट्रेस भयो वा केही कुरामा तनाव सृजना भयो ? के गर्नुहुन्छ ? चुप लागेर बस्नुहुन्छ, संगीत वा एकान्तको सहारा लिनुहुन्छ अथवा मेडिटेसन गर्नुहुन्छ ?
क्यानाडा–साउदी विवाद: हवाई सेवा बन्द
साउदी अरबको सरकारी वायुसेवाले टोरोन्टो आउजाउ गर्ने उडानहरू स्थगित गरेको जनाएको छ । वायुसेवाले आगामी सोमबारदेखि हवाई सेवा रद्द गरिएकाले त्यसपछिका टिकट बिक्री नगर्न आदेश दिएको साउदी प्रेस एजेन्सीले जनाएको छ ।
तमिलनाडुका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा डीएमके पार्टीका अध्यक्ष एम करुणानिधिको मंगलबार मृत्यु भएको हो । चेन्नाईस्थित एक अस्पतालमा उपचाररत करुणानिधिको ९४ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको हो ।
चीनले बनायो आवाजभन्दा ६ गुणा छिटो गतिमा उड्ने विमान
चीनले आवाजभन्दा ६ गुणा बढी गति भएको आफ्नो पहिलो हाइपर सोनिक विमानको सफल परीक्षण सम्पन्न गरेको छ ।
इन्डोनेसिया भूकम्प : १०० भन्दा बढीको मृत्यु
इन्डोनेसियाको लोम्बोक टापुमा आइतबार गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या एक सय पुगेको छ । अधिकारीहरूले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने जनाएका छन् ।
सडक सुरक्षा माग्दै विद्यार्थीद्वारा प्रदर्शन
बंगलादेशको राजधानी ढाकामा एक साताअघि सडक दुर्घटनामा विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि विरोधमा उत्रेका विद्यार्थीहरूले नवौं दिन पनि प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
पहिलो व्यावसायिक अन्तरिक्ष उडानको तयारी
अमेरिकाको स्पेस एक्स र बोइङ स्टरलाइनरको पहिलो व्यावसायिक अन्तरिक्ष उडान अन्तिम तयारीमा पुगेको छ ।